पतिशोकमा परेकी बिना मगरलाई कञ्चनपुरबाट भावुक पत्र – Everest Dainik – News from Nepal
पतिशोकमा परेकी बिना मगरलाई कञ्चनपुरबाट भावुक पत्र
'तपाईको भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि हामीलाई सहारा मिल्ने छ ।'
आदरणीय नेतृ बिना मगर नमस्कार !
तपाई पतिशोकमा परेको दुःखद घडीमा तपाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट पत्र लेखिरहेकी छु । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा तपाईका पति प्रकाश दाहालको आकस्मिक निधनले पूरै देश शोकमा डुबेको तपाईलाई जानकारी नै छ ।
त्यसमा पनि तपाई र हाम्रो प्रत्यक्ष नाता सम्बन्ध जोडिएको व्यक्ति गुनाउनुपर्दा तपाई जत्तिकै पीडा हामीलाई पनि छ । दुःखदको यो घडीमा पूरै देश र कञ्चनपुरका जनता तपाईको साथमा छन् । कलिलै उमेरमा पतिको मृत्यु देख्नु एउटा महिलाका लागि कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् । यो पीडालाई संसारका अरु जुनसुकै पीडासँग पनि तुलना गर्न सकिँदैन । पतिशोक मेरुदण्ड भाँचिएजस्तै पीडा हो ।
पति प्रकाश दाहालको निधनपछि तपाईको मेरुदण्ड भाँचिएझैं भएको हामी सबै अनुमान लगाउन सक्छौं । मेरुदण्ड मात्रै होइन, मुटु चुडिएको होला, जीवनका सपना र योजना सबै फिक्का लाग्न थालेका होलान् । जीवन र परिवारको अभिन्न सदस्य गुमाउनुपर्दा जीवन जिउनुको अर्थ खोज्नुपर्ने अवस्था समेत आउँछ । एकछिन सबै अर्थ निरर्थक लाग्छन् । तपाई अहिले त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ । मंसिर २ गते साँझसम्म तपाईमा विशाल सपना र योजनाका साथ जोश र जाँगर थियो ।
तपाई जितेर गएपछि ५ वर्षसम्म तपाईको कामले दिने नै छ भन्ने भरोसामा हामी छौं । विपक्षीको अफवाह र भ्रमलाई निस्तेज पार्न तपाईको भौतिक उपस्थिति नै काफी छ ।
देश चुनावी अभियानमा होमिएको बेला तपाई पनि व्यस्त दिनचर्या बिताइरहनुभएको थियो । कार्यकर्ता भेटघाट र चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना योजना र प्रतिवद्धता सुनाइरहनुभएको थियो । जसले कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनतामा आशा र भरोसा पलाएको थियो । त्यो आशा अब के होला ? कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका हरेक जनतामा यही प्रश्न खेलिरहेको छ । यो प्रश्न उब्जिएको तपाईप्रति अविश्वास भएर होइन, तपाईको निष्क्रियतामा विपक्षीको भ्रम र झुठ हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले हो । तपाई शोकमा भएको बेला पहिला जत्तिकै सक्रिय रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न । यो सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् ।
तर, चुनावी कार्यक्रमले तीब्रता पाएको र प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बेलामा भएको दुःखद घटनाले कतै तपाईलाई धेरै दिन निष्क्रियतातिर लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । तसर्थ, तपाईको सक्रियता र भूमिका तत्काल चाहिने भएकाले यो पत्र लेख्नुपरेको हो । तपाई निष्क्रिय भइदिनुभयो भने अफवाह, झुठ र भ्रमलाई नै चुनाव जित्ने सहारा ठान्ने विपक्षीले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र समग्र कञ्चनपुरको विकासका लागि तपाईले चुनाव जित्नु अपरिहार्य छ । यसअघि चुनाव जितेर गएपछि केही उपलब्धी देखाउन नसकेका र जनतालाई हिलो र धुलोमै अलपत्र पार्ने व्यक्तिले जितेर गएमा फेरि जनताको दिनचर्या नरकजस्तै हुनेछ ।
तसर्थ, जनताको भविष्यलाई सहज बनाउन तपाईको नेतृत्व आवश्यक छ र तपाईको जित अत्यावश्यक ठानिएको हो । यस क्षेत्रका जनताका आधारभूत समस्यालाई तपाईले नजिकबाट देख्नुभएको छ र त्यसको समाधान गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता तपाईमा देखिन्छ ।
तपाई होमिएको मैदान चुनावी कार्यक्रम मात्रै थिएनन्, यो अभियान कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका हरेक जनतालाई आधारभूत समस्याबाट मुक्त गर्ने अभियान थियो । तपाई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका हरेक जनताको विकासको मेरुदण्ड हुनुहुन्छ ।
तर, आकस्मिक र अकल्पनीय शोकले यो इच्छाशक्तिलाई कमजोर पार्ने छैन भन्ने विश्वासमा हामी छौं । समाज बदल्ने बाटोमा तपाई बाल्यकालदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ । सामाजिक परिवर्तनका लागि ११ वर्षमा बाल कलाकार हुँदै जनयुद्धमा होमिनुभएपछि भएका थुप्रै सामाजिक सुधार हामीमाझ छन् । तर, तपाई जन्मेको क्षेत्रमा अझैं भौतिक र आर्थिक विकास हुन नसकेको कुरा तपाईसामु छर्लङ्ग छ ।
तपाईले बाल्यकालमा सोचेको सपना र बुनेका योजना तथा विकास र आर्थिक समृद्धि देख्ने जनताको आशा पूरा गर्ने शिखरमा तपाई पुग्नै लाग्दा आइलागेको आपतले सबैलाई दुःखी बनाएको छ । विकासको सपना पूरा गर्ने शिखरमा पुग्ने बाटोमा अवरोध आउन नदिन तपाई हामी सबैले यो शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । तपाईले घरपरिवारलाई भुलेर माओवादी आन्दोलनमा होमिएकै कारण अहिले मुलुकमा सामाजिक समानता र महिलाका थुप्रै अधिकार स्थापित भएका छन् ।
यतिबेला पनि पतिशोकलाई मनको एउटा कुनामा दबाएर कञ्चनपुरको १ नम्बर क्षेत्रलाई भौतिक र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउने महाअभियानमा तपाई सक्रिय हुनुपर्छ । समाज र देशका लागि तपाईले २७ महिने नारकीय जेल जीवन, थुप्रै दुःख र पीडा भोग्नुभयो । चुनावको मुखैमा अर्काे शोक थपियो ।
पतिशोकका कारण तपाईलाई पूर्ववत् रुपमा आकर्षक सम्बोधन र यथार्थ पूतिवद्धता गर्न समस्या हुन सक्ला । तर, तपाईको भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि हामीलाई सहारा मिल्ने छ ।
यो शोकले तपाई होकिएको चुनावी कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । तपाई होमिएको मैदान चुनावी कार्यक्रम मात्रै थिएनन्, यो अभियान कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका हरेक जनतालाई आधारभूत समस्याबाट मुक्त गर्ने अभियान थियो । तपाई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका हरेक जनताको विकासको मेरुदण्ड हुनुहुन्छ । पतिशोकले तपाईको मेरुदण्ड भाँचिएझैं भएको छ, हामीले तपाईलाई हाम्रो विकासको मेरुदण्ड ठानेका छौं र त्यो मेरुदण्ड सक्रिय होस् भन्ने चाहन्छौं । तपाईको लोकप्रियता, राजनीतिक पहुँच, गाउँघरमा देखिने सक्रियतामा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
पतिशोकका कारण तपाईलाई पूर्ववत् रुपमा आकर्षक सम्बोधन र यथार्थ पूतिवद्धता गर्न समस्या हुन सक्ला । तर, तपाईको भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि हामीलाई सहारा मिल्ने छ । चुनाव प्रचारका क्रममा तपाईले हाम्रो समस्या, गुनासा र आवश्यकता सुनिदिए मात्रै पुग्छ । त्यसको जवाफ तपाई जितेर गएपछि ५ वर्षसम्म तपाईको कामले दिने नै छ भन्ने भरोसामा हामी छौं ।
विपक्षीको अफवाह र भ्रमलाई निस्तेज पार्न तपाईको भौतिक उपस्थिति नै काफी छ । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने चुनावी अभियानमा तपाईको सक्रियता चाँडै देखिने आशामा ।
– राधा कँडेल बेलौरी, कञ्चनपुर